नेपाल–भारतको पौराणिक सम्बन्धमाथि राजनीति हाबी हुनुहुँदैन – शेखर गिरी
निवर्तमान महासचिव, नेपाल–भारत मैत्री संघ
० वर्तमानमा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध कस्तो छ ?
— नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध अनुपम र अद्वितीय छ । नेपाल भारतबीच खुला सीमा छ । दुई देशबीच धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सामाजिक र पारिवारिक सम्बन्ध छ । हामी दुवै देशका जनता एउटै आस्थाका अंशियार हौं । राजनीतिको कुरा गर्ने हो । दुवै देशबीच राजनीति सम्बन्ध तलमाथि हुनु स्वभाविक कुरा हो । हामी परापूर्वकालदेखि नै एउटै आस्था र धार्मिक केन्द्रका अंशियार छौं । त्यसैले नेपाल भारत सम्बन्धलाई राजनीतिक आधारभन्दा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्धको विश्लेषण गरेर हेर्नुपर्छ । आज पनि हामी नेपालीले आफ्ना पिता पूर्खालाई तर्पण दिँदा वैदिक मन्त्र उच्चारण गर्दा भारतवर्षे, हिमवतखण्डेलगायत शब्दको प्रयोग गर्छौं । पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, केदारनाथलगायत धार्मिकस्थलहरू दुवै देशका जनताका लागि आस्थाका केन्द्र छन् । त्यस्तै, भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल र उहाँले ज्ञान प्राप्त गरेको बौद्धगया दुवै देशका जनताका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण स्थान छन् ।
० तर, नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध जोड्ने काम धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिकलगायत विभिन्न पक्षले गरेका छन् । तर, नेपालमा भारतको सम्बन्धमा राजनीतिक पक्ष नै हाबी हुने गरेको छ नि ?
— अल्प ज्ञान र स्वार्थका लागि गरिने राजनीतिका कारण यसो भएको हो । भारत, नेपाललगायत यस क्षेत्रका ७ वटा मुलुक पहिला भारतवर्षमै थिए । भनाइको मतलब समय कालअनुसार राजनीति सीमाहरू बदलिएका छन् । यो भूखण्डमा केही देशहरू निर्माण भएका छन् । तर, धार्मिक र आस्थाका सम्बन्धलाई राजनीतिसँग सरोकार हुँदैन । त्यसैले त हिन्दू धर्म अथवा बुद्ध धर्म एउटा गोलाद्र्धबाट अर्को गोलाद्र्धमा पुगेका छन् । जहाँसम्म नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा राजनीति हाबी भएको कुरा छ । यसको मुख्य कारण छ, नेपालमा लामो समयसम्म राजनेताको अभाव रहनु । स्वार्थका लागि राजनीति गर्ने र कुनै नीहित उद्देश्य पूर्ति गर्न लागिपरेपछि समस्या देखिने गर्छ । वृहत्तर राष्ट्रका लागि सोच्ने राजनेताहरू नै भएनन् । बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता नेताहरूको अभाव देखियो । आफूलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गरेको देखिन्छ । मै लाऊ मै खाऊ भन्ने सोच हाबी भएकाले नेपाल भारतबीचको सम्बन्धमा समस्या आउने गरेको छ । नेपाल र भारत मिलेर आर्थिक प्रगति गर्न सक्छौं । हामीले वैदिककालदेखिको सम्बन्धलाई विश्लेषण गर्नुपर्छ । भगवान राम र माता सीताबाट सुरू भएको नेपाल भारतसम्बन्ध आज पनि कायम छ । हाम्रा दुई देशको बीचमा रोटी र बेटीको सम्बन्ध छ ।
० नेपालमा कहिलेबाट राजनीतिले नेपाल र भारतको सम्बन्धमा असर पार्न थाल्यो ?
— नेपाल बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । तर, जनताको स्वार्थलाई तिलाञ्जली गरी पार्टी र व्यक्ति विशेषका लागि काम गर्ने राजनीतिक परिपाटीको हालीमुहालीले भएको छ । त्यसकारण नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई राजनीतिको चश्माले होइन विकास र समृद्धिको चश्माले हुनुर्पछ । हाम्रा नेताहरूले भारतलाई फरक फरक चश्माबाट हेर्ने गर्छन् । यो नै गलत हो । यो देशको वृहत्तर आर्थिक समृद्धि र प्रगतिका लागि रोजगारीको श्रृजना गर्नुपर्छ । विभिन्न किसिमका प्राकृतिक जल तथा सम्पदालाई उपयोग गरेर भारतको साथ लिएर प्रगतिको बाटोमा हिड्नुपर्छ । तर, हाम्रा नेताहरूले आँखा झुकाएर र झिम्काएर बोल्ने गर्छन् । तर, प्रेम भावले आँखामा आँखा मिलाएर आर्थिक समृद्धि र हितको कुरा हुन्छ अनि नेपाल र भारत दुवै देशका लागि राम्रो हुन्छ । जबसम्म हामीले विकासको रोड म्याप बनाउँदैनौं तबसम्म समृद्धि हुँदैन । नेताहरूले धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम माग गरेका छन् । भारतविरोधी भावना उजागर गरेर आफूलाई खुब राष्ट्रवादी भएको देखाउन खोजेका छन् । यो अन्ध राष्ट्रवाद हो ।
० धरै कुराको हामी भारतकै अनुशरण गर्ने गरेका छौं । तर, समृद्धिको कुरा त्यो गतिमा अनुशरण गर्न सकेका छौ ?
— भारतको गम्भीर चासो भनेको नेपालको समृद्धि र प्रगति हो । त्यस्तै, सुरक्षाको चासो पनि हो । किन भने हाम्रा सीमा खुला छन् । नेपालको राजनीति सलब रूपमा उभिन सकेको छैन । एउटै सरकार पाँच वर्ष टिक्न सकेको छैन । जहाँसम्म समृद्धिको कुरा गर्ने हो भने पछिलो समयमा केही सकारात्मक काम पनि भएका छन् । धैरै समयदेखि थाँती राखिएको अरूण तेश्रोबाट सुरू भएको उज्यालो यात्रा पश्चिमको पञ्चेश्वरसम्म पुगेको छ । भारतीय कम्पनीलाई लगानी गर्ने वातावरण बन्दै गएको छ । त्यसैले पछिल्लो समय नेपाल भारत सम्बन्ध उचाईंमा पुगेको छ ।
प्रकाशित मिति : २०४ साल जेठ १२ गते शुक्रबार ।